Thar Htet – Medium
Cloud ကို ကွန်ပျူတာလိုသုံးတတ်ဖို့
ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်က Personal Computer ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းစီမံတတ်၊ အသုံးချတတ်နေပြီ၊ ဥပမာ ဖုန်းဆိုလည်း ဖုန်းအလျောက်၊ mac, Windows ဆိုလည်း laptop desktop အလျောက် စီမံပြီး အလုပ်လုပ်တတ်တယ်။ နည်းမျိုးစုံနှင့် အဲဒီ computer device တွေကို အလုပ်မျိုးစုံမှာ သုံးတတ်သလို၊ အသုံးချတဲ့ system တွေ Process တွေနှင့် software တွေကိုပါ ပုံစံထုတ်၊ တည်ဆောက်တာတွေ လုပ်တတ်နေပြီးဖြစ်တယ်။
Internet ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က information network တွေကို သာ အဓိက အာရုံစိုက်ကြတယ်၊ တစ်ဘက်မှာက connected computers တွေ ရှိလာတဲ့ trend က Cloud ဆီရောက်လာတာပဲ။ အဲဒီတော့၊ အဲသလို ချိတ်ဆက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို မိုဘိုင်းဖုန်းတို့၊ desktop တို့ သုံးတတ်သလိုမျိုး သုံးတတ်ရင် နောက်တစ်ဆင့်တတ်တာပဲ။ ပိုကော်ငးတဲ့အချက်က ကွန်ပျူတာကို ကိုယ်ပိုင်တောင် ဝယ်ထားစရာမလိုပဲ သုံးသလောက်ပဲ ပေးရတဲ့ စနစ် ရှိနေတော့ လူတိုင်းဟာ အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှု စွမ်းအားရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနိုင်ခွင့် တပြေးညီ ရသွားတယ်။ နောက်ဆုံးဗျာ Quantum Computer အထိတောင် ငှားသုံးလို့ရတယ်၊ Program တော့ ရေးတတ်ရမှာပေါ့လေ။
အဲဒီတော့ ယခုခေတ်မှာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အနေနှင့် commandline ကနေ ကိုယ့် desktop ကို စီမံသလို၊ bash shell…
Milk Tea and Future of our Kids.
လ္ဘက်ရည်နှင့် ကလေးတွေရဲ့ အနာဂါတ်
ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဥ်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် တရုတ်၊ အမေရိကန်နှင့် အာစီယံ ကောင်းခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ နေရာကနေ စဉ်းစားကြည့်တာရော၊ လက်ရှိ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ မြင်ရတာကို ယထာဘူယျကျကျ စဉ်းစားကြည့်မိတဲ့ အခြေအနေတွေ အရရောက၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြလို့မရဘဲ ခံစားကြည့်လို့ပဲ ရတဲ့ ပေါင်းစည်းမှု အားကြီးတစ်ခုက ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးရဲ့ ထိုင်ခုံကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီ။
အနာဂါတ်မှာ အဲဒီစုပေါင်းအားကြီးက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေး အာဏာချိန်ခွင်အလှည့်အပြောင်းကြီး ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
တရုတ်လို၊ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီးတွေဟာ ဒါကို တွက်ဆ မိနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ရယ်စရာ ကောင်းတာက အဲဒီ အနာဂါတ်ရဲ့ အာဏာက Milk Tea Alliance လို ပျံ့နှံပြီး လူမျိုးစုံ နိုင်ငံမျိုးစုံ ပါဝင်တဲ့ လေထဲကအဖွဲ့အစည်းကနေစီးဆင်းလာတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ခေတ်မမီတဲ့ အတွေးရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်တော့ Milk Tea Alliance ဆိုတာ ကလေးကစားတာလို့ပဲ မြင်ကောင်းမြင်ကြလိမ့်မယ်။
Milk Tea Allianceဆိုတာ အမှန်တော့ စိတ်ကူးယဥ် (fiction) တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းနားလည်ပြီး၊ ပါဝင်နိုင်တဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးတွေ နိုင်ငံသားတွေ တန်းညှိလို့ လွယ်ပြီး စုစည်းနိုင်တဲ့ ၊ ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက် စုပေါင်းလို့ရတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုပဲ။…
WTF? Zwenex 2021
What’s The Future? Zwenex 2021
၂၀၂၁ ဇွဲနဲ့ အနာဂါတ် ဘယ်လဲ?
ကုမ္ပဏီ၏ ဦးဆောင် တာဝန်ခံ တစ်ဦးအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအားလုံး သိရှိစေရန် ရိုးသားစွာ တင်ပြတဲ့ စာကို အားလုံးသိအောင်တင်ပြတာပါ။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် တိတိကပဲ၊ Zwenex အဖွဲ့သားတွေ WFH အလုပ်လုပ်နည်းကို တင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ Zwenex လို နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအသေးစားတွေဟာ ဘယ်လောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ဆိုစေ ပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေမှာ ဘယ်လောက် ခံနိုင်ရည်ပျော့တယ်ဆိုတာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်ခန်းစာ ယူစရာပါ။
(၁) Zwenexsys ရာဇဝင် အကျဉ်း
🌟 Zwenexsys | Zwenex | ဇွဲနဲ့ | ဇဝဲနဲ့ | ဇဝန | စေ့ဆော်မှုတွန်းအား။
Zwenexsys (Zwenex ဇွဲနဲ့) ကို (၂၀၁၂) ဒီဇင်ဘာလက စတင် တည်ထောင်လာခဲ့တာ၊ (၂၀၂၀) ဒီဇင်ဘာ မှာ (၈) နှစ် ရှိပါပြီ။ ယခု (၂၀၂၁) ဇွန်လမှာတော့ (၈ နှစ် ခွဲ) ရှိပြီပေါ့။ “ဇွဲနဲ့” အမည်ရဲ့ မူလဇာတိသည် (ဇဝန) ဆိုတဲ့ ပါဠိ စကားလုံးကို အခြေခံပြီး၊ ”လျှင်လျှင်မြန်မြန်ရှိခြင်း၊ တွန်းအား၊ စေ့ဆော်မှု၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နားလည်ခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေနှီးနွယ်ပြီး အမည်ပေးထားတာပါ။ ဗမာလို အမည် ”ဇွဲနဲ့” ဆိုတာကလည်း ဇွဲကောင်းခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း အနှစ်သာရရှိသလို၊ အင်္ဂလိပ်အမည် Zwenex ကလည်း၊ နီးစပ်နာမည်တူ မရှိတဲ့ စကားလုံးအမည်…
Work-From-Home — Zwenex အဖွဲ့နည်း
Covid-19 ဖြစ်တော့ Work From Home (WFH) လုပ်ကြရာမှာ လုပ်ငန်းတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ လက်သင့်ရာ နည်းပညာတွေကို ယူပြီး၊ အလုပ်မရပ်သွားအောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။ ယခု ဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက၊ ကျွန်တော့်အဖွဲ့ဝင် (ဝိုင်းတော်သား) တွေ ဒီဂျစ်တယ်နည်းတွေကို သုံးပြုပြီး ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတင်ပြပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက COVID မဖြစ်ခင်ကတည်း အားလုံးနီးပါး ဒီဂျစ်တယ်နည်းကို သုံးပြီး၊ ရုံးတွင်းမှာ တည်ထားတဲ့ အရင်းအမြစ်မရှိဘဲ၊ Cloud ပေါ်မှာပဲရှိနေတာကြောင့်လည်း လွယ်လင့်တကူ လုပ်လို့ရတာပါ။ ရုံးထဲမှာက လူရယ်၊ ကွန်ပျူတာရယ်၊ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ရယ်ပဲ ရှိကြပြီး၊ ကျန်တဲ့ လည်ပါတ်၊ သိမ်းဆည်း၊ မျှဝေချင်း အကုန်လုံးက Cloud နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးကြပါတယ်။
WFH ရယ်လို့ လုပ်ကတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် တကိုယ်ရည်သုံးဖို့ အင်တာနက်တပ်ဆင် ထားလို့ အသင့်ဖြစ်တဲ့လူတွေ ရှိသလို၊ မရှိတဲ့လူတွေကျတော့ ရုံးက စားရိတ်နှင့် အင်တာနက် တပ်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ကအလုပ်လုပ်ရတဲ့ကာလာအတွင်းမှာ မီတာခ ကုန်ကျနိုင်တာမို့၊ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကို တစ်လလျှင် တစ်သောင်းကျပ် ထပ်မံပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ ကြမ်းခင်းမှာ ထိုင်ပြီး၊ စားပွဲပုလေးနှင့် တစ်နေကုန်လုပ်တာမျိုးမလုပ်အောင်၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင် ဝယ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီလိုနှင့်ပဲ တစ်လအတွင်းမှာ အားလုံး ကျကျနနနှင့် အိမ်ကနေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အလုပ်လုပ်နိုင်ကြတော့တာပါပဲ။…
ဇွဲနဲ့ အလုပ်သင် (Zwenex Intern)
အလုပ်သင် ဝင်ကြမယ့် မောင်တို့မယ်တို့၊ ကျောင်းဆင်းတော့မယ့်၊ များမကြာမီ ဘွဲ့ယူကြရတော့မယ့် လူငယ်တွေ နှင့် ပါတ်သက်ပြီး၊​ တစ်စွန်းတစ်စ အတွေးတွေ စုံပလုံစီရှိနေတဲ့ အကြောင်းတွေကို အလုပ်များလို့ မရေးဖြစ်ဘဲ နေတာ၊ အလုပ်တွေများလွန်းလို့ ဘာကို စလုပ်ရမယ်မခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့၊ ခေါင်းလည်းရှင်းအောင်၊ အပြောင်းအလဲလည်းဖြစ်အောင် စာရေးလိုက်တယ်။ (ပြန်မစစ်ထားလို့ စာလုံးပေါင်းတော့ သည်းခံကြ)
Industrial Attachment at Honeywell Singapore, Me with blue T at right.
ကိုယ်တိုင် Intern အဖြစ် အလုပ်သင်ဝင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိပါ။ ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့စင်ကာပူက ကျောင်းများမှာတော့ Internship လည်းရှိသလို၊ Industrial Attachment လို့ခေါ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီပလိုမာ အောင်လက်မှတ် တန်းမှာလည်း Internship ဆင်းရသလို၊ ဘွဲ့ကြိုတန်းမှာလည်း IA ဆင်းရပါတယ်။ ၂ ကြိမ်လုံးမှာ၊ ကျောင်းက သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်း သင့်တင့်တဲ့ လုပ်အားခရပါတယ်။ ပထမ တစ်ကြိမ်မှာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ လုပ်ခဲ့ရပြီး၊ ဘွဲ့ကြိုတန်းမှာတော့ အိုင်တီကုမ္ပဏီ ခပ်ငယ်ငယ် တစ်ခုမှာ ဝင်ရပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ကျောင်းချိန်အားလို့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို ခရီးသွားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရယ်၊ Business Intelligence Solution တွေ ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရယ်၊ နောက်ဆုံး ကျောင်းပြီးလို့ အချိန်ပြည့်အလုပ် ဝင်ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာရယ် ကိုယ့်အတတ်ပညာနှင့် ဆိုင်တဲ့ အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွေကို လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိပါတယ်။…
E-Gov Forum ရန်ကုန်ရဲ့ တိုးတက်မှုတွေ
ပရိသတ် ထဲက ဝန်ထမ်းတွေက အစ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ဝေဖန်တာ၊ အကြံပြုတာ၊ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောပြကြတာ ကြားရတာ ပြောင်းလဲလာ၊ ပွင့်လင်းလာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Forum ရဲ့ အသွင်အပြင်၊ ပြင်ဆင်ပုံအတော်ကောင်းပါတယ်။ ဝင်ပေါက်နှင့် စင်မြင့်ကို ပြင်ဆင်ထားပုံ၊ နောက်ခံ Vinyl ထားတဲ့ပုံကောင်းပါတယ်။ LED screens တွေကတော့ Panel လုပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ လူနှင့် ကွယ်နေတယ်။
တက်ရောက်ကြတဲ့ လူတွေ တော်တော်စုံပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် တက်ကြသိတိုင်အောင်၊ အခန်းကျဉ်းသွားပါတယ်။ နေပြည်တော်က ဌာနဆိုင်ရာတွေက CIO တွေ တော်တော် စုံစုံ တွေ့ရတယ်။ E-Government Steering Committee က အကြီးအကဲပိုင်းတွေနှင့်၊ Sub Committee တွေက ဆရာတွေ တော်တော်များများ တက်ကြပါတယ်။ နယ်အသင်းတွေက မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း တွေ့ရတော့၊ ဒီပွဲဟာ ကပ်ပြီးလုပ်သည့်တိုင်၊ လူတိုင်းသိကြ၊ အလေးထားကြမှန်းသိသာပါတယ်။
Panel Discussion တွေကို မမီလိုက်တော့ အကဲမဖြတ်နိုင်ပါ။ အခြားလူတွေဆီက တစ်ဆင့်ကြားရတာကတော့ သူတို့ အားရကြတယ်ပြောပါတယ်။ ပရိသတ် ထဲက ဝန်ထမ်းတွေက အစ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ဝေဖန်တာ၊ အကြံပြုတာ၊ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောပြကြတာ ကြားရတာ ပြောင်းလဲလာ၊ ပွင့်လင်းလာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်ကို ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်ကတော့ နည်းနည်းညံ့ပါတယ်။ ဘတ်ဂျတ်အများကြီး မသုံးနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိုရင်းက အစားမဟုတ်ဘဲ၊ စကားဖြစ်လို့၊ စကားပြောဝိုင်းတွေ ကောင်းလာတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ။…
TIIDE 2018 — Pushing our own upper limit — 522.
(ဒီခေါင်းစဉ်ကို သုံးမှဖေ့ဘုတ်မှာ ကျွန်တော့်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး၊ group တွေထဲမှာ အတင်းတုပ်မယ့်လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှာမို့ ဒီခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးအောင်တော့ဖတ်နော်။ Screenshot ရင် အရှည်ကြီးရိုက်ရမှာ။ ❤️)
ကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ သြဂုတ်လကို ရောက်ပါပြီ။ မတ်၊ ဧပြီကတည်းက ဆရာ့ဆရာတွေကို လိုက်တွေ့၊ ကျောင်းတွေကို အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်ပြီး၊ ၂၀၁၇ က လုပ်ခဲ့တဲ့ ICIP17, In-campus Internship Program 2017 ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြ၊ ဆွယ်တရားဟောပြီး ပါဝင်ဖို့ စတင်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ICT လောကမှာ ကဏ္ဍမျိုးစုံ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဆရာ (၈) ဦးကပါဝင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
CU တော်တော်များများဆီကို အကြောင်းကြားထားပြီး၊ အချက်အလက်တွေ ရထားပေမယ့်၊ ဆရာတွေ အတွက်လည်း မထောင်းတာမယ့် ခရီးမျိုးဖြစ်မယ့်နေရာ၊ ကျောင်းသား အရေအတွက်လည်း သင့်တင့်တဲ့ ကျောင်းကို အဖွဲ့သဘောထားနှင့် ရွေးချယ်ကြပြီး၊ ဘယ်ကျောင်းကို၊ ဘယ်ဆရာက ကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက် တာဝန်ယူမယ်ဆိုတာ ခွဲဝေသဘောတူပြီး၊ ဆိုင်ရာကျောင်းတွေကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီး ခရီးစဉ်နှင့် အချိန်ဇယား အသေးစိတ်တွေကို ဧပြီလကုန်၊ မေလဆန်းမှာ အတည်ပြုပြီး လုပ်ငန်းစခဲ့တယ်။…
အကြံပေးရဲ့ — ဂွင်
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Microsoft Office License ဝယ်ဖို့ တင်ဒါခေါ်လိုက်တဲ့ စာမျက်နှာအောက်မှာ အကြံပေးတာတွေရော၊ အပြစ်ဖို့တာတွေရော၊ စွပ်စွဲတာတွေရော တွေ့ရတဲ့အထဲမှာ “တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို အကြံဉာဏ်ပေးနေသူတွေများ ရှိနေလား(ဂွင်ဖန်ဖို့)” ဆိုပြီးတစ်ယောက်က ရေးထားတာ တွေ့ရလို့၊ ဒီစကားလေးကို ကြိုက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ဖို့ စဉ်းစားမိပြီး ရေးလိုက်တယ်။ အနာပေါ်တုတ်ကျလို့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ရေးတယ်လို့များဟားကြလိမ့်ဦးမလားပဲ။ ဒီစာကို အဆုံးအထိဖတ်ပြီးရင်တော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနားလည်သွားမယ်။
ဘာလို့ လိုင်စင်တွေကို ပိုက်ဆံအကုန်ခံဝယ်ရသလဲ။
Microsoft ကနေဘာလို့ တိုက်ရိုက်မဝယ်သလဲ။
Office 365 ပဲသုံးပါတော့လား။
LibreOffice ဆိုတာရှိတယ်လေ၊ Free ရတယ်။
Opensource သုံးပြီး ပိုက်ဆံခြွေတာသင့်တာပေါ့။
ဘာအရေးပါတာတွေလုပ်မှာမို့ လိုင်စင်နှင့် ဝယ်သုံးရတာလဲ Free ကိုပဲလိပ်ပါလည်အောင်သုံးပါဦး။
အကြံပေးတဲ့လူက ဂွင်ဖန်ဖို့ လုပ်နေသလား။
စသဖြင့် မေးခွန်းတွေ၊ အကြံပေးတာတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီစကားတွေ ကိုပြောနေတာဟာ စဆရက လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောနေတဲ့ အကြောင်းရင်းခံကိုယ်၌က ကောင်းမွန်တဲ့ စေတနာ အရင်းခံရှိမှန်းသိသာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အရင်က ဒီစကားတွေပြောခဲ့တာပါပဲ။ စေတနာကိုး။…
ဤဆောင်းပါးကို ယခုနှစ် TIIDE18 Internship Program တွင်ပါဝင်ကြသော ကျောင်းသူ/သား များအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားပါသည်။
အလုပ်သင်ဝင်ကြမယ့် ကျောင်းသူ/သား များ ကျောင်းပြီးဘွဲ့ရလျှင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတဲ့အခါ၊​ ကွန်ပြူတာနှင့် လုပ်စားသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခြားအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ ယခုဖော်ပြတဲ့နည်းတွေက အသုံးတည့်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ မူလတန်းက စလို့၊​တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားချိန်အထိ အတန်းစာတွေ၊ ပညာရပ်များစုံကို သင်ကြားခံခဲ့ရပေမယ့်၊ စာကျက်နည်း၊​ လေ့လာသင်ယူနည်းကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသင်ပေးခဲ့ပါ။ စာကျက်ရင်းနှင့်ပဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်လေးတွေ သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြီးဆရာမိဘ တစ်ယောက်ယောက်က ပုံစံချပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းနည်းနှင့် တော့ လေ့လာ၊ သင်ယူ၊ လေ့ကျင့်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ တော်တော်လေး ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရည်းစားကတစ်ဘက်၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးကတစ်ဘက်၊ ကျောင်းစာကတစ်ဘက်၊ ဆိုးတာက ဒီပလိုမာတုန်းက Information System နှင့်ပြီးခဲ့တော့ တက္ကသိုလ်မှာ Computer Engineering ကိုယူရတော့ Hardware တွေ၊ Maths တွေက မရင်းနှီးတော့ စိတ်လည်းမပါ၊ လိုက်လည်း မလုပ်တော့ ခက်ခဲခဲ့တယ်။ အခု ပြန်တွေးတော့၊​ လက်ရှိ သိထား၊ တတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသာ အဲဒီတုန်းက သိခဲ့၊ နားလည်ခဲ့ရင်၊​ တော်တော် လွယ်ကူမှာပါလား၊​ စာလည်းထူးချွန်နေမှာပါလားလို့ နှမြောမိတယ်။…
E-Government ဖော်ဆောင်ရေး သံသရာဝဲဂယက်ကရုန်းထွက်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ၊ ထိထိရောက်ရောက်ရွေ့လျားဖို့က..
E-Government ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သူဌေးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေ၊ (ခုခေတ်စကားနှင့်ဆိုရင်) ဂျင်းထည့်သွားတဲ့လူတွေ၊ အားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေ၊ ခြေခြေမြစ်မြစ် လေ့လာသုံးသပ်ပြသူတွေ၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တွေကို လှည့်ပါတ်ပြီး သင်တန်းပေးနေတဲ့သူတွေ၊ အီလေးဆွဲပြီး မျှောလိုက်နေတဲ့ လူတွေ….. စသည်ဖြင့်… သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပါဝင်ပြီးမျိုးစုံလုပ်နေကြတယ်။
အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်း ဒီ E-Government ဆိုတာအတွက် နားလည်လည်မလည်လည် ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်ရသလို၊ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုခု လုပ်နေမှ၊ သူတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို ပြနိုင်မှာဆိုတော့၊ တစ်ဦးခြင်း၊ တစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ကိုယ်နားလည်သလို လုပ်ကြကိုင်ကြ။ အခုဆို နိုင်ငံတော်အဆင့် ဦးဆောင်ကော်မတီဆိုတာဖွဲ့ထားပြီဆိုတော့ အစိုးရတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွမှာ ပိုလို့ဖိအားတွေရှိလာတော့မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြရဦးတော့မယ် ဆိုတော့ကာ… အထက်က စာပိုဒ်ကို ပြန်သာဖတ်ကြပါတော့။
ဒီလိုအလုပ်မဖြစ်တဲ့ သံသရာထဲက လွတ်မြောက်၊ ထိထိရောက်ရောက် ခရီးပေါက်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ဒီစာတိုလေးမှာ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဆန်းပြားသော်လည်း၊ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်နှင့် အယူအဆကို တင်ပြပါမယ်။ ကောင်းမကောင်းကတော့ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် သုံးသပ်၊ ဝေဖန်၊ လေကန်ကြပေတော့။…